जब २४ वर्षे युवतीले आफ्नै हजुरबासँग बिहे गरिन...
विश्व , अन्य
जनतापाटी बुधवार, माघ २३, २०७५, १४:०९:०० मा प्रकाशित
एजेन्सी । अमेरिकाको फ्लोरिडामा एक २४ वर्षे युवतीले ६८ वर्षका वृद्धसँग बिहे गरिन् । कुनै गहिरो प्रेम बसेर वा बाध्यताले होइन उनले बिहे गरेको । ती वृद्ध निकै नै धनी रहेको थाहा पाएपछि उनले आफूभन्दा ३ गुणा जेठा वृद्धसँग बिहे गरेकी हुन् ।
बिहेअघि ती वृद्धसँग उनको हल्का चिनापर्ची भएको थियो । दुवैजनाले राजीखुसीले बिहे गरे र मियामीस्थित गोल्डेन बिचमा रहेको वृद्धको घरमा रोमाञ्चक पलहरु बिताउन सुरु गरे । एकदिन जब ती बेहुलीले पतिको घरमा राखेको फोटो एल्बम हेरिरहेकी थिइन्, तब उनी झसँग भइन् । एल्बममा रहेको एउटा फोटोमा ती युवतीका बुवा पनि थिए । त्यसपछि आफ्ना बुवाको फोटो यहाँ कसरी आयो ? के तपाइँले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ ? भनेर सोधिन् ।
ती वृद्ध पतिले जुन जवाफ दिए, त्यो अकल्पनीय थियो । वास्तवमा ती युवतीका पिता उनका लोग्नेकै छोरा रहेछन् । अर्थात् उनले आफ्ना साख्खै हजुरबुवासँग बिहे गरेकी रहेछिन् । आखिर हुने हुनामी भैसक्यो । उनीहरुले हजुरबुवा–नातिनीबीचको यस्तो पवित्र नातालाई धुमिल बनाइसके । अब प्रायश्चित गर्दै उनीहरु छुट्टिएलान् कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर उनीहरु लोग्ने स्वास्नीकै सम्बन्धमा जीवन बिताउने निधो गरेका छन् ।
समाचार अनुसार ती युवतीले आफ्ना हजुरबालाई जान्ने भएदेखि कहिल्यैपनि देखेकी रहेनछिन् । त्यसैले डेटिङ साइटमार्फत चिनजान भएर रेष्टुरेन्टमा भेटघाट गर्दा र सम्बन्ध अघि बढाएर बिहे गर्ने बेलासम्म पनि उनले आफ्नै हजुरबालाई चिन्न सकिनन् । हजुरबाले पनि आफ्नै नातिनीलाई चिन्न नसक्दा पापको भागिदार हुनुपर्यो ।
फरार अभियुक्त कारागार चलान सोमवार, माघ २१, २०७५, ०९:२८:००
धर्म प्रचारको आशंकामा केही विदेशी उद्योगलाई निगरानी गरिरहेका छौंः मन्त्री यादव मंगलवार, भदौ १२, २०७५, ०७:४१:००
हुम्लाका दुई महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार बिहिवार, बैशाख १९, २०७६, ०८:१३:००
इराकमा बम विस्फोटः छ जनाको मृत्यु, तीस घाइते
नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान